रिभर फल्स पावरको आईपीओमा पहिलो दिन मै १३ लाख १७ हजारको आवेदन « Artha Path
रिभर फल्स पावरको आईपीओमा पहिलो दिन मै १३ लाख १७ हजारको आवेदन
काठमाडौं । रिभर फल्स पावर लिमिटेडले कम्पनीले आज देखि (बैशाख २८ गते) प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका २७ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने गरेको थियो । सीडीएससीका अनुसार आज साँझ ५ बजेसम्म यो आईपीओमा १ लाख ७ हजार ६३७ आवेदकबाट १३ लाख १७ हजार ४० कित्ता सेयर माग भएको छ ।
जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात ५४ हजार ६ सय कित्ता शेयर कर्मचारीका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ३६ हजार ५ सय कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र बाँकी २५ लाख ३८ हजार ९ सय कित्ता सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा जेठ ४ गते र ढिलोमा जेठ ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा १ लाख कित्तासम्म लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यसका साथै मेरो शेयर वेब तथा एप मार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
आजदेखि बलेफी हाइड्रोपावरको आईपीओ कारोबार शुरु हुने, कतिमा होला पहिलो कारोबार ?
काडमाडौं । बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारण शेयर आजदेखि दोस्रो बजारमा कारोबार शुरु हुने भएको छ
२१.९३ मेगावाटको काबेली ३ जलविद्युतको मुख्य लगानीकर्तामा एनएमबि बैंक
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले २१.९३ मेगावाटको काबेली ३ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता भई वित्तीय
नेप्सेमा बलेफी हाइड्रोपावरको आईपीओ सूचीकृत, ओपनिङ्ग रेञ्ज कति पायो ?
काडमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओ सूचीकृत भएको छ ।
लगानीको अवसरः अपर हेवाखोला हाइड्रोपावरको आईपीओ बिक्री खुला, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ आज (जेठ १० गते, मंगलबार) देखि निष्काशन